FAA handray vaksinin'i Johnson & Johnson
Home » Vaovao momba ny fahasalamana » FAA handray vaksinin'i Johnson & Johnson
Ny Federal Aviation Administration any Etazonia dia mametraka ny fahatokisany ny vaksinin'ny Johnson & Johnson COVID-19 vaovao
Taorian'ny fahazoan-dàlana hampiasa vonjy maika avy amin'ny US Food and Drug Administration (FDA) ho an'ny vaksinin'ny Janssen COVID-19 an'ny Johnson & Johnson, dia nanapa-kevitra ny Federal Aviation Administration (FAA) fa ny mpanamory sy ny hafa izay manao adidy mora azo antoka dia mety hahazo ilay vaksiny eo ambanin'ny fepetra momba ny fanamarinana ara-pitsaboana navoakan'ny FAA azy ireo. Ny FAA sy ny mpanara-maso ny fifamoivoizana amin'ny rivotra dia iharan'ny vaksinin'ny FAA.
Mba hitazonana ny fiarovana avo indrindra amin'ny National Airspace System, ny FAA dia hitaky amin'ireo nahazo ity vaksinin-doka tokana ity hiandry 48 ora alohan'ny hanaovana adidy amin'ny fiaramanidina mora tohina, toy ny fanidinana na fanaraha-maso ny fivezivezin'ny rivotra. Ny fe-potoana fiandrasana, izay mitaky ny voka-dratsy mety hitranga, dia mihatra amin'ireo mihazona ny taratasy fanamarinana ara-pahasalamana Airman navoakan'ny 14 CFR Fizarana 67 na ny fahazoan-dàlana ara-pitsaboana navoakan'ny FAA Order 3930.3C.
Ireo mpitsabo matihanina ao amin'ny FAA dia hanara-maso hatrany ny fizarana voalohany ny vaksinin'ny Johnson & Johnson COVID-19 ary hanitsy ny tolo-kevitra ilaina.
Ny FAA dia hanombana ireo vaksiny fanampiny rehefa mahazo alalana amin'ny fampiasana vonjy maika an'ny FDA izy ireo ary hanome toro-hevitra amin'ireo mpanamory sy mpanara-maso ny fifamoivoizana an-habakabaka amin'ny fotoana fiandrasana ilaina rehetra. Ny masoivoho dia nanadio ny vaksinin'ny Moderna sy Pfizer nankatoavin'ny FDA ho fampiasan'ny fiaramanidina, miankina amin'ny fotoana fiandrasana 48 ora.
Ny FAA dia mampihatra fotoana fiandrasana fohy aorian'ny fitantanana vaksiny hafa, ao anatin'izany ireo izay voan'ny tuberkulose sy typhoid.